သတ်မှတ်ချက်များ - Infinite-electronic
ဒါဟာသဘောတူညီချက် www ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ Infinite-Electronic.hk, သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး!
သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာမှတ်ပုံတင်ပြီးဒေါက်တာဖာနန်ဒက်သင်သည် Infinite-Electronic.hk အပေါ်မှတ်ပုံတင်မတိုင်မီအသုံးပြုမှုနှင့် privacy ကြေညာချက်၏ဤဝေါဟာရကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ, သင်ဖတ် menas, သဘောတူညီခဲ့နှင့်အသုံးပြုမှုနှင့် privacy ကြေညာချက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရှိသမျှသောစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤကြေညာချက်ကိုပြောင်းလဲလျှင်, Infinite-Electronic.hk မှအဆင့်မြှင့်ဗားရှင်းထုတ်ဝေရန်ပါလိမ့်မယ်။ သဘောတူညီချက်၏အကြောင်းအရာအားလုံးကိုစာအုပျ၏ရက်စွဲအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့ရောက်လိမ့်မည်။ သင်ဤတည်းဖြတ်မူသဘောမတူဘူးလျှင်, သင် Infinite-Electronic.hk နှင့်အတူဆက်ဆံရေးရပ်ဆိုင်းဖို့ရှိသည်။
1, USER မှ REGISTRATION:
အားလုံး Infinite-Electronic.hk အသုံးပြုသူဥပဒေအရ omnibus ဥပဒေရေးရာစည်းနှောင်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်သူကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီရှိရမည်။ သငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုကြပါ။ သင်သည်သင်၏ Infinite-Electronic.hk အကောင့်ကိုလွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်ရောင်းလို့မရပါဘူး။ Infinite-Electronic.hk သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုအညီသင့်အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အားလုံးအသုံးပြုသူများကိုသေချာသာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် COMPONENTS-CENTER.COM ဖို့ကိုမှန်ကန်ခိုင်လုံသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ပေးရမညျ။ မည်သည့်အပြောင်းအလဲများရှိလျှင်, အကြောင်းကြားနှင့်ချက်ချင်း Infinite-Electronic.hk မှ update လုပ်ပါ။
အားလုံး Infinite-Electronic.hk အသုံးပြုသူများအ Infinite-Electronic.hk သို့မဟုတ် Infinite-Electronic.hk မိတ်ဖက်ထံမှအီးမေးလ်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုလက်ခံရန်သဘောတူသည်။
Infinite-Electronic.hk အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်အပါအဝင်အားလုံးအသုံးပြုသူများလျှောက်ထား privacy ကိုကြေညာချက်ရှိပါတယ်။ သငျသညျ Infinite-Electronic.hk အသုံးပြုသူကာလ၌ (privacy ကိုကြေညာချက်မဆို updated version ကိုနှင့် Infinite-Electronic.hk) ကိုဖတ်ပြီးလက်ခံ privacy ကိုကြေညာချက်ကိုသင်မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါ Infinite-Electronic.hk သုံးစွဲဖို့, သင်စိုးမိုးရေးအားဖြင့်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်သငျ့သညျ။
1), သငျသညျမကျြနှာသာခန့်အားလုံး user data ကိုသတင်းအချက်အလက်, အစစ်အမှန်အမည်, လိပ်စာ, အီးမေးလ်လိပ်စာ, ဆက်သွယ်ရ information..etc ခြင်းမပြုမီ။ Infinite-Electronic.hk အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
2) မဟုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။ Infinite-Electronic.hk ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်စာမျက်နှာပိုကောင်းအောင်နိုင်ရန်အတွက်လက်လှမ်းန်ဆောင်မှုများ, စတာတွေပေးသူကို Browser ကိုဂုဏ်သတ္တိများ, Operating system ကိုအမျိုးအစား, ISP ၏ domain name ကိုအပါအဝင်, အိုင်ပီလိပ်စာမှတဆင့်မဟုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါလိမ့်မယ်။ Infinite-Electronic.hk ကိုလည်းအသုံးပြုသူစီးဆင်းမှုစာရင်းဇယားကိုအထက်ပါသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းနေဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
3), ကိုယ်ပိုင်ဒေတာလုံခြုံရေးအတွက်။ Infinite-Electronic.hk လုံခြုံ server ကိုအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ကိရိယာများအားဖြင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။
4) ကိုယ်ရေးဒေတာကိုထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။ အစိုးရကပြဌာန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ရန် Infinite-Electronic.hk မေးသောအခါ Infinite-Electronic.hk, ဥပဒေရေးရာစစ်ဆင်ရေးဌာနတောင်းဆိုချက်ကိုသို့မဟုတ်အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှုရညျရှယျအမြင်နှင့်အတူအညီပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုသတင်းအချက်အလက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Infinite-Electronic.hk ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေတွင်မဆိုတာဝန်ယူမထားဘူး။ အောက်ပါအခြေအနေများတွေ့ဆုံသည့်အခါ Infinite-Electronic.hk လိုအပ်သောအကွာအဝေးထက် ကျော်လွန်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်: ကျနော်တို့ပြီးသားသင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရတယ်, သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်အသုံးပြုသူများ data တွေကိုသတင်းအချက်အလက်ပေး Infinite-Electronic.hk မေးကြည့်ပါ။
3, TRADE ကို:
1), အသုံးပြုသူများအားလုံးသက်ဆိုင်သောဥပဒေများ, စည်းမျဉ်းများ, စည်းမျဉ်းများနှင့်ဒေသခံဥပဒေများတောင်းဆိုမှုကိုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုမှု Infinite-Electronic.hk ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဝယ်ယူလိုက်နာရမည်။ သင်တို့သည်လည်းအထက်ပါစာရွက်စာတမ်းများအပေါငျးတို့သစည်းကမ်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများအပါအဝင်အသုံးပြုမှုနှင့် privacy ကြေညာချက်၏ဤဝေါဟာရများကိုစောငျ့ရှောကျဖို့သေချာပါစေရန်လိုအပ်သည်။
2) သင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဥပဒေများ၏စည်းကမ်းချက်များအားဖြင့်တားမြစ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မှလွဲ. ဝယ်ယူသည့်အခါ Infinite-Electronic.hk အတူငွေပေးငွေယူဖြည့်စွက်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းနေကြသည်။ သငျသညျအမိန့်နေရာတစ်ပြိုင်နက်, သင်သည်နေသမျှကာလပတ်လုံးဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေများဥပဒေရေးရာနှင့်ဤသဘောတူညီချက်အောက်မှာဖြစ်သကဲ့သို့, ကုန်စည်ဖော်ပြချက်ထဲတွင်ကျပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်။
3), Infinite-Electronic.hk ပေါ်တွင်ကြော်ငြာခြင်း, စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့်ထုတ်ပြန်ချက်များတစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုမရှိကြပေ။ ကျနော်တို့ Infinite-Electronic.hk အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်များနှင့် POS သိသာမှားယွင်းတဲ့သို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာထဲကဖြစ်ကြသည်ထွက်ရှာတွေ့သောအခါတဘက်မှသတင်းအချက်အလက်မှတ်မိဖို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Infinite-Electronic.hk အရည်အတွက်ကန့်သတ် purchasing ၏ညာဘက်ရှိသည်။ သငျသညျအမိန့်နေရာအခါ, သငျသညျမြားကိုလညျးသငျသညျထိုအကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အတွက်ဥပဒေရေးရာအသက်အရွယ်မှာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံနှင့်သင်နိုင်ရန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးအချက်အလက်တွေအားလုံးကို၏စစ်မှန်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
4), ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင် site ပေါ်တွင်သတ်မှတ်ထားသောလိမ့်မည်။ သတင်းအချက်အလက်ဒီလိုသတိပေးချက်မရှိဘဲမည်သည့်အချိန် updated လိမ့်မည်။ Delivery တာဝန်ခံသင်ရွေးချယ်ကွဲပြားခြားနားသောရေကြောင်းနည်းလမ်းများနှင့်အညီကွဲပြားခြားနားအခြေချလိမ့်မည်။ မည်သည့်မတော်တဆမှုဥပမာ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းတိုးမြှင့်စျေးနှုန်း, VAT ကိုအပြောင်းအလဲများဖြစ်စေ, Infinite-Electronic.hk စနစ်ကအမှား, အပေါငျးတို့သအကြောင်းပြချက်ယူမှုအတည်ပြုချက်ပြီးနောက်စျေးနှုန်းပြန်လည်ပြင်ဆင်စေလိုလျှင်, Infinite-Electronic.hk အီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ်ဤသတင်းအချက်အလက်အကြောင်းကြားရန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်, သင်ယူမှုကိုပယ်ဖျက်သို့မဟုတ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။
4, အရည်အသွေးနှင့် After-Sales Service:
Infinite-Electronic.hk ထုတ်ကုန်တင်းကြပ်စွာအစိုးရနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မည်။ ယခင်စံချိန်စံညွှန်းမရှိဘဲနေလျှင်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အထက်ပါစံချိန်စံညွှန်းမရှိဘဲနေလျှင်, ဖောက်သည်များဆွေးနွေးရန်နှင့် Infinite-Electronic.hk အကြားဆုံးဖြတ်နိုင်သည်, ထုတ်လုပ်သူရဲ့ကမ္ဘာ့အဆင့်စံနှုန်းနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ မဆိုရညျအသှေးပြဿနာသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၏စံချိန်စံညွှန်းများထဲကအသုံးပြုသူများပြန်လာသို့မဟုတ်အစားထိုးတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
သင်, စက်ရုပ်မဆိုကြင်နာနေဖြင့် website ကိုရိုက်ထည့်ပါပင့်ကူသို့မဟုတ်ရေးသားမှုပုံစံအတွက် Infinite-Electronic.hk 's ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် software ကိုလန်းဆန်းနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်။
1), (Infinite-Electronic.hk သမ္မာသတိတွင်) ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်အတူ Infinite-Electronic.hk က်ဘ်ဆိုက်ဝန်နိုင်သည့်မဆိုမိုနှင့်အချိုးအစားမမျှတသောအပြုအမူ။
2) ဆင်းသက်လာအလုပ်လုပ်အောင် Infinite-Electronic.hk ၏ခွင့်ပြုချက်, အပြောင်းအလဲ, မိတ္တူ, လွှဲပြောင်း, ရေးသားခြင်းမရှိဘဲ, ဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် () သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များ မှလွဲ. ။
5) မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, Trojan horse, worm ကိုဗိုင်းရပ်စ် timebomb, bot တွေဟာ cancel, အီစတာကြက်ဥ, spyware တွေရဲ့သို့မဟုတ်ပျက်စီးစေ, ပြင်ဆင်, ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်သောအခြားကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်, ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှု, လျှို့ဝှက်ကြားဖြတ်, စာချုပ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်မည်သည့်စနစ်ကကျော်ယူ, ဒေတာကိုသုံးပါ သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို။
အဆိုပါမူပိုင်ခွင့်မူပိုင်ခွင့်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်နှင့် Infinite-Electronic.hk အားဖြင့်လူအပေါင်းတို့ကိုကမ်းလှမ်းအားလုံးမည်သည့်အခွင့်အရေးများ Infinite-Electronic.hk ပိုင်။ Infinite-Electronic.hk, မည်သူမဆိုသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးcan¡¯t download, အမိတ္တူ, ဂီယာ, ပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း, ပြင်ဆင်ရန်၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အပေါငျးတို့သဥပဒေရေးရာတာဝန်ကိုထမ်းရကြမည်။ အသုံးပြုသူဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ Infinite-Electronic.hk မှတ်ဉာဏ်မှလက်ျာဘက် Infinite-Electronic.hk ၏ဒေတာဆာဗာကိုပိုင်ဆိုင်တယ်။
Infinite-Electronic.hk အလို့ငှာအလုပ်လုပ်အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်သေချာအောင်, ဝန်ဆောင်မှုပြတ်တောက်ရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုကမ်းလှမ်းရန်တာဝန်ခံဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ် Interrupt အချိန်ကန့်သတ်မှုအတိုဆုံးကာလ၌အသုံးပြုသူချောချောမွေ့မွေ့အင်တာနက်အပေါ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်သေချာပါစေ။ သို့သော်အင်အား majeure သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များ၏ရလဒ်, ထိန်းချုပ်ဖို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပျက်ကျမှုသို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့မလုပ်နိုင်အောင်, ဆုံးရှုံးခဲ့ရအချို့စံချိန်, မက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်မှဖြစ်ပေါ်မနိုင်အဖြစ်, Infinite-Electronic.hk တာဝန်မဲ့သည်နှင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူကမ်းလှမ်းမှုကိုမှားယွင်းတဲ့သို့မဟုတ် uncompleted နှင့်မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်ကိုမှဖြစ်ပေါ် မလုပ်နိုင်အသုံးပြုမှု Infinite-Electronic.hk ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ဆုံးရှုံး, Infinite-Electronic.hk တာဝန်မဲ့ဖြစ်ပါသည်ခံရ၏။
အားလုံးအရိုအသေ၌ဤသဘောတူညီချက်ဟောင်ကောင်၏ဥပဒေများဖြင့်အုပ်ချုပ်ရမည်။ ဒီ website အားလုံးအသုံးပြုသူများအဘယ်သို့ Infinite-Electronic.hk ကိုင်ဆောင်သူတရားရုံးနှင့်သာလွန်တရားရုံး၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကတည်ရှိသည်နေကြသည်။ ဒီသဘောတူညီချက်မဆိုပြဋ္ဌာန်းချက်မမှန်ကန်ပါသို့မဟုတ်မပြုနိုင်အဖြစ်အုပ်ချုပ်ခံရလျှင်ဒီသဘောတူညီချက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များပါပြဋ္ဌာန်းချက်ဖျက်ပစ်နိုင်နှင့်ကျန်ရှိသောပြဋ္ဌာန်းချက်ကွပ်မျက်ခံရခံရကြလိမ့်မည်, သီးခြားရှိပါတယ်။